Apple Music - iPhone News | Wararka IPhone (Bogga 2)
Gawaarida Gawaarida waa qalabkii ugu horreeyay ee qalabka 'Spotify' ee muusikada u keena baabuurta aan lahayn nidaamyo fara badan
Apple Music waxay iskaashi la samaysay Warner Music si loo abuuro liisaska, liisaska liiska dadka transfotrn
Beta 4 ee macruufka 14.5 wuxuu ku muujinayaa koodhkiisa soo bandhigista liisaska shaqsiyadeed ee magaalooyinka.
Maanta Maarso 1, 2021 waa maalinta ugu dambeysa ee laga faa’iideysto saddexda bilood ee bilaashka ah ee Amazon Music HD ay siiso dadka isticmaala Prime.
Ka faa'iideyso bixinta: 3 bilood oo bilaash ah Amazon Music HD oo ah 0 euro
Ilaa iyo Maarso 31 waxaad ka faa'iideysan kartaa dalabkan oo aad qandaraas ku ridi kartaa Amazon Music HD oo waxaad ku raaxeysan kartaa 3 bilood bilaash ah
Apple Music waxay si rasmi ah u sii deysaa Taariikhda loo yaqaan 'Replay 2021'
Apple Music waxay si rasmi ah u daahfureysaa liiska 'Replay 2021', oo bilaabaya in la sameeyo bilowga sanadka.
Haddii aad tahay arday waxaad heli kartaa 6 bilood oo bilaash ah Apple Music
Mar labaad, lix bilood oo Apple Music ah oo loogu talagalay ardayda leh nus sano gebi ahaanba bilaash ah
Haddii aadan weli go'aansan inaad iska qorto Apple Music, ragga jooga Tim Cook waxay na siiyaan 5 bilood oo bilaash ah.
Tani waa waxa ay u ekaanayaan 'Spotify for CarPlay'
Spotify waxay durbaba tijaabineysaa arjiga cusub ee ay u soo bandhigi doonto dhammaan isticmaaleyaasha CarPlay wixii ku soo kordha mustaqbalka.
Cusboonaysiinta soo socota ee Tesla ayaa ku dari kara Apple Music
Korontoleyda Tesla waxay ku dari karaan adeegga muusikada qulqulka Apple Music cusbooneysiinta soo socota
Apple Music wuxuu bilaabaa inuu gaaro Google ku hadla smart
Google ayaa kaliya ku dhawaaqday in noocyadeeda kala duwan ee ku hadla caqliga ay hadda la jaan qaadayaan adeegga muusikada ee Apple.
Apple waxay soo saartaa heesaha loogu dhageysiga badan yahay Apple Music sanadka 2020
Sannadka 2020-ka ayaa dhammaad ku sii socda, Apple Music-na waxay abuurtay liis ay ku qoran yihiin heesaha sanadka ugu badan la dhageysto.
Isticmaalayaasha cusub ee Shazam waxay ku raaxeysan karaan 5 bilood oo Apple Music ah bilaash
Isticmaalayaasha cusub ee Shazam waxay heli doonaan shan bilood oo bilaash ah oo Apple Music ah illaa Janawari 17.
Apple waxay ku dhawaaqday guuleystayaasha Abaalmarinta Apple Music 2020
Abaalmarinta Apple Music 2020 waxaa horey loogu qeybiyey shan abaalmarin, oo ay ku jiraan Taylor Swift iyo Lil Baby.
Apple Music for Android waxay heshaa tabta 'Dhageyso' iyo warar dheeri ah
Apple waxay cusbooneysiisay barnaamijkeeda Apple Music ee loogu talagalay Android si loogu daro waxa ku cusub ee iOS iyo iPadOS 14.
Disney waxay siisaa waxyaabo gaar ah macaamiisha Apple Music
Apple Music waxay yeelatay kudhowaad soddon liistar oo cusub iyo waxyaabo cusub oo ay naqshadeeyeen Disney Music Group.
Apple One, shirkadda waxaa ka go'an in "ku wada jiraan"
Apple One ayaa ah adeeg cusub oo kulminaya wax kasta oo ay Apple ku bixiso qiimo mideysan iyo qorshooyin kala duwan oo lagu kala doorto.
Apple One waxaa la xaqiijiyay dhowr maalmood ka dib soo bandhigida Apple
Xirmooyinka adeegga Apple ee loogu magac daray Apple One ayaa ka muuqda barnaamijka Apple Music ee loogu talagalay Android
'Worldwide', xayeysiiska cusub ee Apple Music
Apple waxay bilawday xayeysiinteeda cusub ee 'Worldwide' iyadoo ay goobjoog yihiin fanaaniin caalami ah si kor loogu qaado adeegeeda Apple Music.
Apple Music Radio wuxuu ku dhashay saddex xarumood: "Apple Music 1", "Hits" iyo "Country". "Beats 1" waxaa loo beddelay "Apple Music 1" oo laba cusub ayaa dhashay
Apple wuxuu ku soo laabtay bixinta 6 bilood oo ah Apple Music bilaash ah ardayda
Apple wuxuu ku soo laabtay inuu isku dayo oo uu ku xiro ardayda Apple Music adoo u fidinaya tijaabo bilaash ah oo 6 bilood ah.
Albamka cusub ee Taylor Swift wuxuu dhigayaa rikoor cusub oo ku saabsan durdurrada Apple Music
Albaabkii ugu dambeeyay ee Taylor Swift si uu suuqa u galo isagoon wax ogeysiis ah horay u sii sheegin, wuxuu jabiyay dhammaan diiwaanadii loogu talagalay adeegyada qulqulka muusikada
macruufka 14 ku darayaa daboolida animated in liistada liiska
Wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira macruufka 14 waxaa laga helaa Apple Music, oo leh daboolka liistada ciyaaraha leh.
Spotify wuxuu gaaraa 113 milyan oo macaamiil ah
Tirada macaamiisha ay shaacisay shirkadda Spotify, halkaasoo ay sheeganayaan inay ku sugan yihiin 113 milyan oo macaamiil ah, ayaa u oggolaanaysa shirkadda inay kor u qaaddo qiimaheeda 16%.
The chic @ s ee Cupertino ayaa shaqaaleeyay koox cusub oo dad ah si ay ugu turjumaan ereyada heesaha Apple Music waqtiga dhabta ah.
Apple wuxuu bilaabayaa websaydhka Apple Music xilligan la joogo marxaladda beta ee dhammaan macaamiisha ku jira adeegga muusikada qulqulka
YouTube Music Premium iyo YouTube Premium horeyba waxay ulahaayeen qorshooyin ardayda
Adeegga qulqulka muusikada ee Google ayaa hadda bilaabay qorshooyin cusub oo ardayda ah, qorshayaal bixiya qiimo dhimis 50% ah
Genius wuxuu ku biirin doonaa heesaha Apple Music
Genius waa encyclopedia-ka ugu weyn ee muusigga siiya ereyada, sheekooyinka iyo xiisaha heesaha ku jira howlahooda oo hadda ku jiri doona Apple Music
Cusboonaysiinta ugu dambaysa ee Apple Music App ee loogu talagalay Android waxay heshay dalabyo, ugu dambayntii, iswaafajinta Android Auto, Android CarPlay
Dukumiintihii ugu dambeeyay ee nolosha Ed Sheeran ayaa hadda laga heli karaa Apple Music dhammaan macaamiisha.
Noocii ugu dambeeyay ee beta ee Apple Music ee loogu talagalay Android waxaa ka mid ah taageerada Android Auto
Waxay u muuqataa in adeegsadayaasha haysta Android Auto ay dhawaan ku raaxeysan karaan taageerada Apple Music, iyo ...
Apple Music waxay soo saareysaa qayb loogu talagalay Deutsche Grammophon oo leh xulashada ugu wanaagsan ee muusikada caadiga ah
Wiilasha Cupertino waxay bilaabeen qayb ku takhasusay muusikada caadiga ah ee Apple Music dhexdeeda hoostooda taageere astaanta taariikhiga ah ee Deutsche Grammophon.
Apple waxay soo saartay barta cusub ee Apple Music oo uu jilayo DJ Khaled
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabeen bar Apple Music cusub oo ay ku dhiirrigelinayaan hees cusub oo uu sameeyay DJ Khaled iyo Justin Bieber.
Apple Music waxay leedahay in ka badan 50 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon, oo aan ahayn macaamiil
Sida uu ku sheegay madaxa Apple wareysi uu siiyay Bloomberg, adeegga muusigga ee daadihinaya ee Apple wuxuu leeyahay in ka badan 50 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon, oo aan lacag bixin.
Shirkada Spotify ayaa gaadhaysa 75 milyan oo macaamiil ah
Ragga ka socda Spotify waxay calaamadeeyeen guul muhiim ah oo gaareysa 75 milyan oo isticmaale bixiyeyaal ah iyo ku dhowaad 170 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon oo ka socda barta.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Apple Music ay kori doonto qiyaastii 40% sanadkii
Sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha qaarkood, adeegga muusigga ee Apple wuxuu ku guuleysan karaa 40% koror sanadle ah 3da sano ee soo socota.
Apple Music waxay isu diyaarineysaa inay sii deyso laba dukumiinti oo ka socda soosaaraha muusigga elektarooniga ah Flume
Rabitaankeeda ah inay sii wado soo saarida alaabada maqalka ah, Apple waxay ku dhiiranaysaa inay sii deyso laba dokumenti oo ku saabsan nolosha soosaaraha muusigga elektarooniga ah Flume.
Apple Music waxay leedahay maamule cusub
Dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ee aan ku aragno safka Apple, wuxuu saameeyaa Apple Music, halkaas oo Oliver Schussser uu u noqday madaxa cusub ee adeegga muusigga ee qulqulaya Apple.
Apple Music waxay gaaraysaa 40 milyan oo macaamiil ah
Tirooyinkii rasmiga ahaa ee ugu dambeeyay ee Apple Music ayaa sheegaya in adeegga muusigga ee qulqulaya ee Apple uu gaaray 40 milyan oo macaamiil ah.
Apple wuxuu balaariyaa tijaabada beta ee Apple Music ee Artists
Toddobaadkan gudihiisa war rasmi ah oo ka soo baxay Apple oo la xidhiidha Apple Music iyo ...
Apple Music waxay xireysaa bil rikoor ah oo macaamiisha ah waxayna xoojineysaa adeeggeeda
Apple Music way sii kordheysaa. Sida laga soo xigtay xogtii ugu dambeysay, adeegga qulqulka muusikada ee Apple wuxuu xiray bishii ugu dambeysay ee macaamiisha.
Dhiirrigelinta nooc kasta ha noqotee marwalba way wanaagsan tahay waxayna imaan kartaa waqti kasta iyo xaalad kasta. Tufaax waa cad yahay ...
Codsiga Apple Music ee loogu talagalay Android wuxuu helaa horumarin ku saabsan qeybta fiidiyowga
Codsiga Apple Music ee loogu talagalay Android ayaa hadda la cusbooneysiiyay isagoo ku daray shaqooyin cusub oo hagaajinaya dib u soo celinta fiidiyowyada muusikada iyo sidoo kale hagaajinta xasilloonida iyo waxqabadka.
Qiimo dhimista Apple Music ee ardayda waxay ku degtaa 82 dal oo cusub
Ragga ka socda Cupertino waxay ballaariyeen tirada waddamada Apple Music ee ardayda laga heli karo, iyagoo bixinaya qiimo dhimis 50% ah khidmadda illaa 48 bilood.
Xubnaha Nike Plus waxay heli karaan rukhsad gaar ah Apple Music iyo liisaska liiska
Xiriirka ka dhexeeya Apple iyo Nike ayaa soo hagaagaya waxaanan hadda heli karnaa rukumo bilaash ah oo Apple Music ah maaddaama aan hagaajineyno sumadeena gudaheeda NikePlus.
Apple Music way dhaafi kartaa Spotify tiro macaamiil ah xagaagan Mareykanka
Sida lagu soo warramey The Wall Street Journal, Apple Music ayaa ku sii kordheysa tirada isticmaaleyaasha ka dheereeya Spotify, sidaa darteed bartamaha xagaaga way ka sarreyn kartaa Mareykanka.
Kooxda ugu dambeysa ee aragta iftiinka maalinta ee la socota adeegyada muusikada waa Def Leppard, oo ah adeeg hadda laga heli karo dhammaan adeegyada muusikada qulqulka ah.
Jimmy Iovine kama tagayo Apple, wuxuu doonayaa inuu sii wado socodka xitaa xiiso badan
Soo saaraha muusiga, xubinna ka ah Apple Music, Jimmy Iovine wuxuu daabacay qoraal uu ku diidayo ka bixitaankiisa shirkadda wuxuuna si cad u sheegayaa inuu ku nagaan doono Apple dhexdeeda si uu u sii wado socodka.
Liiste-ciyaar-yahan cusub "My Chill Mix" ayaa u muuqday qaar ka mid ah Isticmaalayaasha Muusikada Apple
Liis cusub oo muusig ah oo cusub ayaa bilaabanaya inuu ka soo muuqdo Apple MUsic, waxaa loo yaqaan 'My Chill Mix' waxaana kuu sheegi doonaa waxa ku saabsan
Ku keydi € 20 lacagta Apple Music qorshaha cusub ee sanadlaha ah
Apple waxay bixisaa ikhtiyaar cusub oo sanadle ah oo loogu talagalay heerka Apple Music taas oo aan ku keydin karno wax ka badan € 20 adoo bixinaya kaliya € 99 sanadka oo dhan
Apple Music ayaa loo cusbooneysiiyay Android ilaa nooca 2.1
Waxaan sii wadaynaa hagaajinta Apple Music ee loogu talagalay Android waxaana markan si toos ah diiradda loo saaray waxqabadka ...
Spotify waxay leedahay 140 milyan oo isticmaale, inta udhaxeysa bilaash iyo macaamiisha
Tirooyinkii rasmiga ahaa ee ugu dambeeyay ee ay soo bandhigtay shirkadda Spotify ayaa ina tusaya sida adeegga baahinta muusigga ee Sweden ay u leeyihiin 140 milyan oo isticmaale
Apple Ayaa Soo Saartay Filim Cusub Oo Loogu Tala Galay Documentary Ku Saabsan Puff Daddy
Ragga ka socda Apple Music ayaa ku soo bandhigaya barta twitter-ka filimka dokumenteriga cusub ee gaarka ah ee ku saabsan nolosha heesaha iyo soo saaraha Puff Daddy.
Apple wuxuu lumiyay Taylor Swift oo ah Apple Music gaar ah
Ku dhowaad saddex sano ka dib markii ay ka saartay buuggeeda dhammaan adeegyada muusikada qulqulka marka laga reebo Apple Music, Taylow Swift wuxuu u duulayaa qulqulka
Qeybtii ugu horreysay ee meerayaasha barnaamijyada hadda laga helo Apple Music
Apple waxay hadda sii deysay dhacdadii ugu horreysay ee barnaamijka dhabta ah ee The Planet of the Apps on Apple Music, kaliya loogu talagalay macaamiisha barnaamijkan
Carpool Karaoke wareejin-off premieres Ogosto 8 on Apple Music
4 bilood kadib dhammeystirka duubista 16-ka qaybood ee Carpool Karaoke spin-off, waxaan horeyba u haysannay taariikh sii deyn ah.
Tidal wuxuu lumiyey agaasimihiisii ​​saddexaad muddo 2 sano gudahood ah
Adeegga qulqulka muusikada Tidal, oo ka kooban farshaxanno muusig oo waaweyn, ayaa shaqada ka eryay maareeyihii saddexaad muddo laba sano gudahood ah
Jimmy Iovine wuxuu qabaa Apple Music inay yeelan karto 400 milyan oo isticmaale
Sida laga soo xigtay Jimmy Iovine, haddii Apple Music ay yeelan lahayd lacag la’aan bilaash ah sida Spotify oo kale, waxay lahaan lahayd 400 milyan oo isticmaale.
Apple wuxuu bilaabay inuu kobciyo Apple Music iyada oo loo marayo GIFs
Apple horey ayey ugu laheyd xisaab rasmi ah adeegga Gifs Ghipy, oo aan ka heli karno inta badan codsiyada fariimaha.
Apple waxay xuquuq gaar ah siisaa filimka dokumenteriga ah ee Clive Davis
Dukumiintiga ku saabsan mid ka mid ah soo saarayaasha muusikada ugu muhiimsan rubuc qarnigii la soo dhaafay ayaa lagu sii deyn doonaa Apple Music
Apple wuxuu soo bandhigayaa Up Next si uu u soo bandhigo fanaaniinta cusub ee Apple Music
Apple wuxuu bilaabayaa Up Next oo ku saabsan Apple Music iyada oo ujeedadu tahay soo bandhigida farshaxanno kala duwan oo caan ah bil kasta adeeggeeda muusikada qulqulka.
Amiirka albumkiisii ​​ugu horreeyay ee dhimashada kadib wuxuu imanayaa Apple Music berri
Apple waxay maamushaa inay daabacdo albamkii ugu horreeyay ee dhimashada ka dib by heesaa Prince isaga oo ka fogaanaya gaar ahaanshaha adeegga adeegga muusigga ee Tidal uu yeelan lahaa.
Facebook Messenger wuxuu la midoobi doonaa Apple Music si uu ula wadaago heesaha
Dhowr bilood gudahood, dadka isticmaala Apple Music waxay awoodi doonaan inay la wadaagaan heesaha ay ugu jecel yihiin Facebook Messenger.
Spotify Wuxuu Ballaadhiyaa Tirada Waddamada Loogu Talo Galay Diiwaangelinta Ardayda Qiimaha Badh
Shirkada iswiidhishka ee qulqulka muusigga ee Spotify ayaa ballaarisay tirada waddamada ay iskaga diiwaan gelin karto diiwaangelinta ardayga oo ah kala bar qiimaha
Apple Music iyo Spotify waxay u qaadaan warshadaha muusikada sanadkoodii ugu fiicnaa
Sanadka 2016 wuxuu matalayay kobaca dakhliga 11% ee warshadaha Mareykanka, oo ah kii ugu sareeyay labaatankii sano ee lasoo dhaafay
Mid ka mid ah milkiileyaasha Tidal, Jay Z, ayaa albumskiisa kala baxay Apple Music
Mid ka mid ah maamuleyaasha sare ee Tidal, rapper Jay Z, ayaa hada ka saaray gabi ahaanba buugyadiisii ​​Apple Music iyo Tidal labadaba.
Apple Music for Android ayaa ugu dambeyntii lagu casriyeeyay naqshad cusub
Apple Music ayaa ugu dambayntii ku guuleysatay sharraxaadda macruufka ee nooca ay ku samayso Android ka dib casriyeyntii ugu dambeysay ee sidoo kale ku dareysa ereyada heesaha.
Apple Music waxay ka sii badnaan kartaa Spotify dadka isticmaala
Markii ugu horeysay, daraasad ayaa la daabacay taas oo Apple Music ay ka badin karto Spotify dadka isticmaala bil kasta oo leh qiyaastii 40 milyan oo isticmaale.
Apple waxay raadineysaa ardayda inay noqdaan safiiro Apple Music ah
Ragga ka socda Cupertino waxay barnaamij ka bilaabaan ardayda qaarkood si ay u siiyaan bilo bilaash ah iyagoo ku beddelaya inay noqdaan safiiro Apple Music ah.
Laba xayeysiis oo cusub oo Apple Music ah: "Ninka ugu Fiican Britishka" iyo "Kuwa ugu Fiican Ingiriiska"
Dhowr xayeysiis oo cusub ayaa ka soo muuqday kanaalka Apple ee UK kanaalka and
Spotify Waxay Soo Bandhigi Doontaa Muusigga Xallinta Sare ee luma Dhawaan
Spotify waxay tijaabin kartaa inay baahiso muusigga Go'aanka Sare, lumis la'aan, si ay ugu fidiso adeeggeeda "Plus" adeeg.
Apple Music "ilaa hadda" waxay dhaaftay 20 milyan oo macaamiil ah
Apple Music waxay ku sii socotaa kor u qaadkeeda meteoriga waxayna durba dhaaftay caqabada 20 milyan oo isticmaaleyaal ah, dhammaantoodna way bixinayaan.
Tidal kadib, sawir-qaadista Prince ayaa hadda laga heli karaa Apple Music, Spotify iyo inbadan
Sawirka muuqaalka 'Prince' ayaa hadda laga heli karaa dhammaan adeegyada muusikada qulqulaya, oo ay ku jiraan iTunes Store
Apple wuxuu Saxeexay Madaxii Hore ee Xiriirka Spotify; dagaalku wuu sii socdaa
Haddii aad moodeysay in dagaalka u dhexeeya Spotify iyo Apple uu burburayo, waad khaldantay: Apple Music waxay kiraysatay madaxa xiriirka Spotify.
Shirkadda Apple ee Carpool Karaoke ayaa yeelan doonta soo jeediyayaal kala duwan
Xilli ciyaareedka cusub ee Carpool Karaoke, oo ka iman doona Apple goor dhow, wuxuu yeelan doonaa soo-jeedin ka duwan ...
Spotify ugu dambeyn ma iibsan doonto SoundCloud
Ugu dambayntii iibsiga suurtagalka ah ee 'SoundCloud' ee Spotify ayaa kansashay qorshooyinka mustaqbalka ee Spotify ee ah inay dadweynaha u soo baxaan
Heshiis lala galay Ola si loogu bixiyo Apple Music gawaaridooda
Apple waxay iskaashi la sameysay sharikad Hindi ah oo gawaarida wadaagta Ola si loo keeno Apple Music to
Amazon Music Unlimited wuxuu bilaabaa inuu sii fido waxaana hada laga heli karaa UK, Jarmalka iyo Austria
Adeegga muusigga ee qulqulaya ee Amazon ayaa bilaabay ballaarintiisa Yurub waxaana hadda laga helaa Jarmalka, Boqortooyada Ingiriiska iyo Austria.
Xiddigaha Drake ee xayeysiiska cusub ee Apple Music
Intii lagu guda jiray xafladda abaalmarinta AMAs galabnimadii, Apple waxay soo saartay olole cusub oo xayeysiis ah oo loogu talagalay Apple Music, oo ay jilayaan ...
Tartanka Apple Music ayaa ku sii kordhaya loolanka loogu jiro in loo tartamo Spotify
Apple Music waxay si adag uga shaqeyn kartaa inay ka takhalusto Spotify, hogaamiyaha saxda ah ee suuqa muusikada qulqulka. Si kastaba ha noqotee,…
Apple ayaa hoos u dhigi karta Apple Music Kirismaska
Apple Music ayaa dhawaan dhameystirtay sanadkeedii nolosheeda, iyo tan iyo markii la bilaabay adduunka muusikada ...
Tufaaxa Apple ayaa Bilaabay 1 Bog Facebook ah
Ragga ku jira Apple waxay go'aansadeen inay bilaabaan bogga rasmiga ah ee Beats 1 ee Facebook ka dib markay arkeen soo dhaweynta weyn ee Beats 1 ee Twitter.
Ogeysiiskii ugu dambeeyay ee Apple Music wuxuu na tusayaa isdhexgalka cusub
Ogeysiiskii ugu dambeeyay ee Apple Music wuxuu ina tusayaa sida isdhexgalka cusub ee adeegga muusikada ee qulqulka Apple u shaqeeyo.
Amazon Music Unlimited, waa adeegga muusikada cusub ee shirkadda iibka internetka
Amazon Music Unlimited, waa adeegga muusikada cusub ee ka socota Amazon, kaas oo aad si buuxda ugu hesho adduunka muusikada dalabka.
Apple Music sidoo kale waxay ku baahin doontaa remixes aan rasmi ahayn barnaamijkeeda
Apple ayaa maanta bilowday inay baahiso waxyaabaha isku dhafan ee ku saabsan barnaamijkeeda muusikada, iyo sidoo kale Spotify iyo SoundCloud.
Albumka 'Drake' ee Views ayaa bilyan jeer lagu sii daayay Apple Music
Albaabkii ugu dambeeyay ee Drake, Views, ayaa la sii daayay in ka badan bilyan jeer tan iyo markii uu yimid Apple Music bishii Abriil ee la soo dhaafay.
James Corden ayaa ku jilaya xayeysiiskii ugu dambeeyay ee Apple Music oo ay weheliyaan Cue, Iovine iyo Bozoma
Xayeysiiskii ugu dambeeyay ee Apple Music wuxuu ina tusayaa James Corden oo fikrado siinaya Iovine, Cue iyo Bozoma xayeysiiska xiga ee Apple Music
Apple Music waxay ka dhigtaa warshadaha muusikada lacag ka soo dejinta
Kuwa ka socda Cupertino ayaa mar kale sameynaya: waxay ku guuleysteen inay wax ka beddelaan warshadaha muusikada ee Apple Music waxayna durbaba ka dhigayaan qulqulka faa'iido.
Apple ayaa beenisay inay damacsan tahay inay iibsato Tidal
Jimmy Lovine wuxuu mas'uul ka ahaa dejinta wixii xan ah ee ku saabsan suurtagalnimada iibsiga Tidal ee Apple Music
Shirkadda Spotify ayaa ku dhawaaqday imaatinka 40 milyan oo isticmaaleyaal ah
Apple waxay ku dhawaaqday imaatinka 17 milyan oo macaamiil ah, hadda Spotify waxay xaqiijineysaa inay gaareen 40 milyan oo isticmaaleyaal ah.
Apple waxay diyaarisaa dalabyo loogu talagalay Apple Music iyada oo loo marayo kaararka hadiyadaha
Markan Apple waxay diyaarsataa dalabyo loogu talagalay Apple Music iyada oo loo marayo kaararka hadiyadda oo macnaheedu noqon karo illaa laba bilood oo bilaash ah sannad kasta.
Isbedelada Apple Music: daboolida cusub ee saldhigyada
Apple Music way sii socotaa oo hadda waxay na siisaa liisas shaqsiyeed maalin kasta ee usbuuca, iyo sidoo kale isbeddello kale oo muuqaal ah.
Liiska Liistada Apple Music ee Macaamiisha ah Waxay Gaarayaan Macruufka 10 Users
Ragga ku jira Apple waxay dhaqaajiyaan Apple Music caadadooda "My New Music Mix" liistada dhammaan iOS 10 beta.
Shirkadda Telstra ee Australia ayaa kuu oggolaaneysa inaad adeegsato Apple Music iyadoon laga dhimin xogta moobiilka
Telstra, oo ah shirkadda mobilada ka shaqeysa ee Australia, ayaa u oggolaaneysa Apple Music in lagu ciyaaro iyada oo aan la isticmaalin gunnada xogta bil kasta.
Hal sano oo dheeri ah, Apple waxay qaban doontaa dhacdo ay fanaaniinta kaladuwan ay kaga qeyb gali doonaan riwaayado kala duwan. Sannadkan waxaa loogu yeedhi doonaa Apple Music Festival.
Apple Music waxay bilaabeysaa inay madax xanuun ku noqoto Spotify, oo doonaya inuu mushahar yar siiyo
Waxay yiraahdeen maya, laakiin waxay u muuqataa in Apple Music ay dhibaato ku noqon doonto Spotify, ugu yaraan marka ay la xaajooneyso fanaaniinta iyo shirkadaha duubista.
Apple wuxuu ku dhawaaqay 2016 London Taariikhaha Bandhigga Apple Music Taariikhaha
Shirkadda Cupertino ee fadhigeedu yahay ayaa hadda shaacisay taariikhaha sannadkan soo socda ee Apple Music Festival, taas oo ka dhigan 10 sano tan iyo markii ugu horreysay
Samsung waxay xireysaa adeegyadeeda baahinta muusikada
Samsung ayaa dhawaan shaacisay xiritaanka adeegga muusigga ee shirkadda Kuuriya ee Caanaha loogu talagalay Sebtember 22
Shazam wuxuu si buuxda ula midoobaa Apple Music
Hagaag hada waxay rabeen inay iskudhafaan xitaa iOS, dhab ahaantii waxay ku sameeyaan Apple Music, astaamaheeda cusub waa kuwo cajiib ah.
Imaatinka Beatles ee Apple Music ayaa la xaqiijiyay
Laga bilaabo berri Beatles-ka waxaa laga heli doonaa Apple Music
Apple wuxuu ku shaqeyn karaa qaab maqal ah oo Go'aan Sare ah
Apple waxaa laga yaabaa inay ku shaqeyneyso qaab cusub oo xallinta sare ah oo loogu talagalay muusikada sannadka 2016
Codsiga Pandora wuxuu hadda la jaan qaadayaa Apple TV
Pandora ayaa hada cusbooneysiisay codsigeeda taasoo ka dhigaysa mid la jaan qaadi karta Apple TV-ga cusub
Sida Looga Tirtiro Muusikada Apple Music Qalabkaaga si aad Meel Ugu Dejiso
Waan banneeyn karnaa boos haddii aan tirtirno heesaha ku keydsan aaladdayada Apple Music.
Google waxay rabtaa Apple Music on Chromecast Audio, Apple wax jawaab ah kama bixinayso
Google waxay horey u xukuntay Chromecast Audio iyo Apple Music, hada Apple ayaa loo jeedaa inuu dhaqaaqo, waxayna umuuqataa inaysan sidaas yeeli doonin.
Maxaan ugu dhejinayaa Apple Music ka dib muddada tijaabada
Saddexda bilood ee tijaabada Apple Music ka dib, waxaan go'aansaday inaan ku sii socdo rukunka oo aan bilaabo bixinta adeegga. Kuwani waa ujeedooyinkeyga.